आखिर नयाँ शहरको परिकल्पना यहि हो त ? कता छन् सरोकारवाला - Hamro Bulletin
धिरज कुँवर आइतबार १७, साउन २०७८ २०:१६
डोटी राम्डो डडेल्धुरा, अछाम राम्डो साँफे !
मान्छे राम्डो मन मिल्याको पन्छी राम्डो डाँफे !!
यो सुमधुर गीतको पहिलो हरफ नै साँफेबगरको सुन्दरताको प्रमाण हो । अग्ला र हरिया डाँडा बीचमा कलकलाउँदो पवित्र बूढीगंगा अनि वारिपारि लमतन्न परेकव बजार। झट्ट हेर्दा स्वर्गकै एक टुक्रा जस्तो लाग्ने साँफेबगर जोकोहीको बसाइ र व्यवसायका लागि पहिलो रोजाईमा पर्छ अहिले पनि। नहोस पनि त कसरी ? यो अछाम जिल्लाकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। यसको अर्को परिचय, यो जिल्लाकै ठूलो नगरपालिका पनि हो। अनि जिल्लाको एक मात्रै स्मार्ट सिटी पनि।
अछाममा ६ लेन फराकिलो बाटो भएको एक मात्रै बजार हो साँफेबगर। तर यो बजार विस्तारै कुरूप हुँदै गएको छ। जथाभाबि अव्यवस्थित पार्कङ, सडक नै ढाक्ने गरि राखिएका बजार र स्थानीयबासीका सामान, सडकभरी असरल्ल छरिएका घर, पसलका सामान र निर्माणका सामाग्रीले बजारको सुन्दरता कुरूप बनिरहेको छ। यसले बजार क्षेत्रमा दैनिकजसो सवारी दुर्घटना पनि निम्ताइरहेको छ। जताततै फोहोरका डुङ्गुर, अव्यवस्थित रुपमा पालिएका कुखुरा र बंगुरका खोरबाट निस्किने दुर्गन्धको त हिसाबै छैन। यसले हाटबजारलाई झन् झन् कुरूप बनाएको छ।
नगरपालिकाबाट फोहोर उठाउने गाडी महिनौँसम्म आउँदैन। आए पनि हाकिम र नगरपालिकाका प्रमुखहरुको आदेश अनुसार चल्ने गरेको सहरी विकासका पूर्वअध्यक्ष एवम् स्थानीयवासी मोहन कुँवरले बताए। ढल र नाली बनाउने बहानामा महिनौँदेखि निर्माण सामाग्री सडकभरी फालिँदा बजार झनै अव्यवस्थित भएको छ।
वृक्षरोपण र बगैँचाका लागि छाडिएको सडकको डिभाइडरमा व्यापारीहरु घर बनाउने इँट्टा, सरिया, बालुवा र ढुंगा राखेका छन्। त्यसले गर्दा रोपिएका बिरुवा पनि मरेका छन्। यति लापरवाही हुँदा पनि स्थानीय निकाय र प्रशासन रमिते बनेका छन्। अन्य सरोकारवाला यो लापरबाहीसामु मौन बसेका छन्। नगरपालिकाले एकजना पनि सफाइ कर्मचारी राख्न नसक्दा बजार दिनदिनै कुरूप भइरहेको गुनासो कुँवरले गरेका छन्।
दैनिक जसो यो शहरलाई हेर्दा लाग्छ आखिर नयाँ शहर को परिकल्पना यहि हो त ? तस्बिरमा हेर्नुस